ⓘ Unyaka wezi-2019 eNingizimu Afrika
5 kuMasingana – Dan Tshanda, 54, umculi Splash. 6 kuMasingana – Johan Claassen, umdlali webhola lobhoxo kanye nomqeqeshi Iqembu lesizwe b. 1929. 13 kuMasingana – Phil Masinga, umdlali webhola likanoputshuzwayo b. 1969.
Iqembu lesizwe lebhola lezinyawo labesifazane laseNingizimu Afrika eliteketiswa ngokuthi i Banyana iqembu lebhola lezinyawo elingaphansi kwenhlangano eyangemele ibhola lezinyawo eNingizimu Afrika eyaziwa ngokuthi yi-South African Football Association. Leli qembu ladlala umdlalo wokuqala neqembu lesizwe labesifazane laseSwazini mhla zingama-31 kuNhlaba ngonyaka wezi-1993. Kuwo lomdlalo wokuqala bebhekene neqembu laseSwazini bawuqoba lomdlalo ngama-14 e-0. Umqeqeshi wokuqala waleli qembu kwabe kungu Augusto Palacios. Iqembu eBanyana Banyana selake ladlala kabili kwimidlalo yama Olimpiki. Baq ...
7 February – UMongameli Cyril Ramaphosa wethula Inkulumo Yesizwe okwabe ngeyesibili enguMongameli waseNingizimu Afrika. Lenkulumo yesizwe ngeyokugcina ngaphambi koKhetho lukaZelonke lonyaka wezi-2019.
1. Abadlula emhlabeni
5 kuMasingana – Dan Tshanda, 54, umculi kanye nomdidiyeli womculo Splash.
6 kuMasingana – Johan Claassen, umdlali webhola lobhoxo kanye nomqeqeshi Iqembu lesizwe b. 1929.
13 kuMasingana – Phil Masinga, umdlali webhola likanoputshuzwayo b. 1969.
Bheka futhi: Unyaka wezi - 2019 eNingizimu Afrika isiNgisi 5 kuMasingana Dan Tshanda, 54, umculi Splash 6 kuMasingana Johan Claassen, umdlali webhola
laseNingizimu Afrika eliteketiswa ngokuthi iBanyana Banyana iqembu lebhola lezinyawo elingaphansi kwenhlangano eyangemele ibhola lezinyawo eNingizimu Afrika eyaziwa
Wikipedia: Unyaka wezi-2019 eNingizimu Afrika